बसन्तागमन र आरुबखडाको ‘हानामी’ !
त्यसो त तिथि ऋतुका आधारमा हामीकहाँ वसन्त लागी सकेको छ । तर प्रकृति कसैले बनाएको पात्रो वा क्यालेण्डरको इशारामा नचल्ने भएकोले मानव निर्मीत मौसमका सूचकांकहरुले जे सुकै भने पनि काठमाण्डौमा अझै पनि जाडो नै छ । अनि रुख विरुवाहरु पतझडका जीवीत नमूना बनेर कठ्याङ्रीदै उजाड स्वरुपमा खडा रहेका छन ।
आज आफ्नै वरिपरी हेर्दा वसन्त ऋतु भने पनि रुख विरुवाले भने हिँउद नै चलीरहेको जानकारी दिए।
अनि १-२ क्लिक यही पतझडको लिएँ ।
(घर नजिकैको बुढो खरीको रुख)
(आफ्नै बारिको हलुवाबेदको रुख—पात झरेर नाङ्गिएको छ)
तस्विर खिच्दा खिच्दै अचानक आफ्नै बारीमा रहेको साधारहणतया कसैले राम्ररी ध्यान नदिने आलुबखडाको बोटहरुमा परे।
अरु वनस्पती र वातावरणले जेसुकै भनेपनि आलुबखाडाको रुखले भने वसन्तागमनको यथेष्ट प्रमाण दिईरहेको थियो ।
ढकमक्क फुलेको आलुबखाडाका रुखहरुमा हेर्दा यस्तै रुखहरु लहरै धेरै बएका भए त यहाँ पनि सानोतिनो ‘हानामी’ हुने जस्तो लाग्यो । हेर्नुस है यी आलुबखडाका रुखहरुले कतै साकुराका याद त दिलाउँदैनन ?
(आरुबखडाको भए पनि फूल त फूलनै हो नी)
आउनुस पनौती मेला भरौं !!
पौराणीक कथन र किंवदन्तीहरुलाई पच्छ्याउने हो भने पनौतीको बाह्र बर्षे मेलाका पछाडि स्वर्गका राजा ईन्द्रले गौतम ऋषि पत्नी अहिल्याको सतित्व हरण गरेको र त्यसको पाप मोचनको लागी १२ सय बर्षसम्म यहाँ रही तपस्या गरेको समेतका आख्यान पाईन्छन। श्रुतीहरुमा कतै कतै पुरै पनौती नगर नै स्वर्गका राजा ईन्द्रले स्थापना गरेको भन्ने समेत पाईन्छ ।
श्रुती र कथनहरुमा जेसुकै भएपनि बाह्र बर्षमा एक पटक लाग्ने पनौतीको मकर मेलामा भने उपत्यका र देशभरबाट श्रद्धालुहरुको संख्या दिनुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । माघे संक्रान्तिबाट सुरु भएर पुरै माघ महिनाभर चल्ने यो मेलामा स्वस्थानी पूर्णिमा पछि भिड केही कम हुने सुनीएकोले म पनि हिजोंको दिन त्यहाँ पुगेकी थिएँ। तर त्यहाँ पुग्दा भिड घट्नुको सट्टा अझै बढ्ने नै क्रममा रहेको देखियो। आजको पोस्टमा त्यहि मकर मेलाका केही दृश्यहरु :
(झिसमिसेमा पुग्दा पनि भिड जम्मा भईसकेको थियो)
(मेलाको तयारीमा सजिएको पनौती)
(मेलमा स्नान गर्दे श्रद्धालुहरु)
(उचाईबाट एक झलक)